दलीय चुनाव चिन्ह नदिए निर्वाचन नै हुन दिन्नौंः बाबुराम. – Sabaikoaawaj.com
दलीय चुनाव चिन्ह नदिए निर्वाचन नै हुन दिन्नौंः बाबुराम.
बिहिबार, चैत्र १७, २०७३ 8:41:04 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, १७ चैत/ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले दलीय चुनाव चिन्ह नपाए चुनाव नै हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । साथै संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन गरिए देशमा अनर्थ हुने बताए ।
प्रकाशित मितिः बिहिबार, चैत्र १७, २०७३ 8:41:04 PM